Otra izay talenta manokana
Otra tahaky ny otra rehetra ny otra nentim-paharazana Malagasy. Entina mitsabo ny tsy fahatomombanana amin’ny ozatra, taolana, sy ny momba ny tenan’olombelona (fanaintainana, tsy fahazoana aina ) izy io. Amin’izao fotoana izao anefa dia difitra ao anatin’ny otra avy any ivelany (Kiné, Ostéo, refléxothérapie…) izay mila ampianarina sy mari-pahaizana vao afaka manao azy, ny otra Malagasy. Mampiavaka an’ity farany anefa dia otra miainga avy amina talenta voajanahary, teo anivon’ny fiaraha-monina, niainana teto Madagasikara hatramin’ny nisian’ny olona, mba hiatrehana ny tsy fahasalamana.
Otra Malagasy isan-karazany
Maro karazany ireo otra nentim-paharazana:
· Otra ho an’ny vehivavy bevohoka na mitady zaza. Ity farany izay hataon’ny antsoina hoe :“mpanavanana” na koa renin-jaza. Raha hazavaina dia ankoatra ny mampiteraka dia mikojakoja ilay otra mba hiatrehana ny fitondrana vohoka toy ny hoe : ambany toerana ilay zaza, mavesatra sns. Ny vehivavy manana aretina any amin’ny taovam-pananahana, toy ny “latsapatana” ohatra dia misy otra hatao manokana ho azy koa.
· Otra vorika: any amin’ny faritra Betsimisaraka any. Otra natao ho an’ny fivontosana na vay vonto.
· Otra “antifanaigny” na “zafindralemy” any amin’iny faritra Avaratra Atsinanana iny. Ny “antifanaigny” izay mitsabo ny tapaka, vadin-kozatra, folaka.
· Otra “rôkatra” : ho an’ireo olona nilanja entana mavesatra ka lasa marary tratra na lamosina vokatry ny faharerahan’ny taova.
· Otra tsy mivantana : Any amin’ny faritr’i Morondava izay tsy atao mivantana amin’ilay marary fa lasa mody ilay mpanotra, manao otra amin’ny vatany eo izy, dia sitrana ilay tapaka na folaka.
· Otra ho an’ny ankizikely :izay mitsabo ny alibotra sy alifisaka. Ary eto Afovoan-tany moa dia misy ny otra hitsaboana ny mangamaso (lalina ny lanilanin’ilay zazakely, milempona ny lohamaleminy, mikaperoperotra ny hoditra, tsy ampy rano).
Mampiasa tanana sy fitaovana
Mampiasa ny tanany aloha ilay mpanotra. Miaraka amin’izany dia mety hampiasa menaka voanio izy. Misy ihany koa ny otra miaraka amin’ny zava-maniry (vahona, tsipipihana, sodifafana sns) ho an’ny “vadin-kozatra”. Ho an’ny “mangamaso” indray dia miankina amin’ilay mpanotra, fa mety hampiasa hazo manitra, voan-drofia, vody fanoto miaraka amin’ny rano izy. Ho an’ny “mpanavanana”, mitsabo ny vehivavy latsapatana, dia rano mafana. Ho an’ny “vorika” indray dia mety mitsakotsako sira miaraka amin’ny rorany na koa “mena-draharaha” ny mpanotra. Ny “rôkatra” dia mampiasa sakamalaho sy menak’omby na katrafay sns. Farany moa dia misy ireo mampiasa karazana lohamenaka. Izany hoe : arakaraky ny aretina, ny talenta, no hampiasaina fitaovana miaraka amin’ny tanana, ao anatin’ilay otra.
Ahoana no hamantarana hoe : tena mpanotra nentim-paharazana ilay olona?
Ny tena mpanotra ara-pomba Malagasy sy manana an’io talenta io dia tsy milaza ny tenany hoe : mahay an’izao, fa ny fiaraha-monina mahalala azy. Tsy mila dokam-barotra ireo mpanotra ireo fa ny olona no manatona azy. Manaraka izany, matetika no manana ny asany hafa manokana izy, tsy misy idiran’io talentany io. Fahatelo, mazàna hasina no hangatahany (izay foy) fa tsy fitadiavam-bola. Ary ny farany dia tsy mahay otra hafa ankoatra io hananany talenta io izy.
Andriandrainarivo Josephin Rasamivelona
Filohan’ny fikambanan’ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara